၇၀ ပြည့် မွေးနေ့ပွဲအလွန် ~ Htet Aung Kyaw
12:34 AM Htet Aung Kyaw No comments
Tuesday, June 23, 2015. The Voice Daily.
အော်စလုိုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ပွဲ
မြန်မာ့ဒီမုိုကရေစီလှုပ်ရှားခေါင်းဆောင်၊ NLD ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အသက် ၇၀ ပြည့် မွေးနေ့ပွဲတခု နော်ဝေးနုိုင်ငံ အော်စလုိုမြို့မှာ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ ညနေပုိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ရောက်တုိုင်း ဒီလုိုအခမ်းအနားတွေ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှာ ကျင်းပနေကြဖြစ်ပေမဲ့ ဒီနှစ်အခမ်းအနား ကတော့ နည်းနည်းထူးတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
(ဒေါ်စုမွေးနေ့ပွဲမှာ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ နုိုဗယ်ဆု နှစ် ၁၀၀ ပြည့် တံဆိပ်ခေါင်း)
ဘာကြောင့်လဲဆုိုရင် မွေးနေ့ပွဲနဲ့အတူကျင်းပတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ခေါင်းစဉ်ကုို ‘’Er Aung San Suu Kyi fremdeles et ikon for demokrati, eller har fredsprisvinneren sviktet sine idealer? အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီအတွက် သင်္ကေတ တခုဖြစ်နေဆဲလား၊ ဒါမှမဟုတ် နိုဘယ်ဆုရှင်ဟာ သူ့ရဲ့ အယူအဆတွေကို စွန့်လွတ်လုိုက်ပြီလား’’ ဆုိုပြီး အမည်ပေးထားလုို့ဖြစ်ပါတယ်။
နော်ဝေး-မြန်မာကော်မီတီ NBC ကပေးထားတဲ့ ဒီခေါင်းစဉ်ကုို မကြိုက်လုို့ဆုိုပြီး မြန်မာပရိတ်သတ်တချို့က မလာကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပရိတ်သတ် ၃၀ ခန့်နဲ့ နော်ဝေးအသုိုင်းအ၀ုိုင်းမှ ၂၀ ခန့် တက်ရောက်လာ တဲ့အတွက် ဒါဟာ အော်စလုိုအတုိုင်းအတာနဲ့ဆုိုရင် ပရိတ်နည်းတဲ့ပွဲမျိုးတော့ မဟုတ်ပါ။
နော်ဝေးနုိုင်ငံရေးအသုိုင်းအ၀ုိုင်းမှ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းနဲ့ လက်ရှိ အော်စလုို ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှ တာဝန်ရှိသူ Kjell Magne Bondevik၊ နော်ဝေးပါလီမန်အမတ် Ola Elvestuen နဲ့ နော်ဝေး-မြန်မာ ကော်မီတီဥက္ကဌလဲဖြစ်၊ DVB ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ ဥက္ကဌဟောင်းလဲဖြစ်တဲ့ Harald Bøckman တုို့က ဒေါ်စု အတွက် မွေးနေ့အမှာစကား ပြောပေးကြပါတယ်။
မြန်မာဖက်က စကားပြောသူ၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီပွဲအတွက် သီးခြားဖိတ်ကြားထားသူတွေကတော့ NLD ပါတီမှ ဥပဒေအကြံပေး ကုိုနီနဲ့ လူငယ်အဖွဲ့မှ မကြည်ပြာတုို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ အခမ်အနားခေါင်းစဉ်ပါ Debate စကားဝုိုင်းဆုိုတာကလည်း ဒီပုဂ္ဂိုလ် ၂ ဦးကုို NBC ညွန်မှုး Audun Aagre က ဒုိုင်ခံမေးမြန်းတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
နော်ဝေးဖက်က တာဝန်ရှိသူတွေအမှာစကားပြောပြီးချိန်၊ Debate ဆွေးနွေးမှုမစခင်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး တေးသံရှင်ကုိုမွန်းအောင်က ‘’ခွန်အားဖြည့်မိငယ်’’ ဆုိုတဲ့သီးချင်းနဲ့ ဖျော်ဖြေပါတယ်။ ၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံဝန်းကျင်က ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ တေးရေးကိုနေ၀င်းရဲ့ ဒဿနဆန်တဲ့ စကားလုံးတွေကို ကုိုမွန်အောင်ရဲ့အသံနဲ့တွဲဖက်လုိုက်တဲ့အခါ ပရိတ်သတ်တွေပါ တေးသွားထဲမျောပါသွားခဲ့တာကို သတိထားမိပါတယ်။
(အော်စလုိုမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ ဆွေးနွေးပွဲ)
‘’နေ၀င်ညကုို ကူးဖြတ်ပြီးမှ ရောင်နီသာတဲ့ နေ့သစ်ကုိုရောက်မယ်၊ … ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ကြိုးစားထားမှ တချိန်မှာ အောင်မြင်လွတ်မြောက်မယ်မဟုတ်လား၊ … သံသရာလမ်းဟာ မချောမွေ့တတ်တော့ တာဝန်ကုိုယ်စီ အားတင်း ရှေ့ဆက်လှမ်း’’…။
‘’အရှုံးမပေးနဲ့ မိငယ်ရေ၊ … ရဲရင့်မှ ကျော်ဖြတ်သွား။ အများအကျိုးအတွက် တာဝန်ထမ်းရွက်တဲ့အခါ တကယ် ကုိုယ်ကျိုးစွန့်နုိုင်မှ’’…တဲ့။ သီချင်းစာသားတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်များ တမင်ရေးစပ်ထားသလားလုို့ ထင်ချင်စရာပါ။
ဒီသီချင်းသံပြီးမှာတော့ ဦးကုိုနီက ‘’ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပက လူသားတွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ရထားသူဖြစ်တယ်၊ နုိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကုို ငြိမ်းချမ်းစွာအသွင်ပြောင်းနုိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေသူဖြစ်တယ်၊ သူ့အဖေ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုိုပဲ သူ့ဘ၀တခုလုံးကို တုိုင်းပြည်အတွက် ပေးဆပ်ထားသူဖြစ်တယ်။ ဒီ ၃ ချက်ဟာ သူရဲ့ သူမတူတဲ့ ထူးခြားချက်တွေဖြစ်တယ်’’ လုို့ ပြောပါတယ်။
မေးခွန်းမေးသူတွေဖက်ကတော့ နုိုဗယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တချိန်က လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စတွေကို ဦးစားပေးလေ့ရှိပေမဲ့ အခု ပါလီမန်ထဲရောက်သွားချိန်ကစပြီး ဒါတွေကို သိပ်မပြောတော့ဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးထက် နုိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်ဖက်ကိုဦးစားပေးရွေးချယ်လုိုက်ပြီလား၊ အထူးသဖြင့် အခု တလော ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းသတင်းတပုဒ်ဖြစ်နေတဲ့ ရုိုဟင်ဂျာတွေ ဖိနှိပ်ခံနေရမှုအပေါ် ဘာမှမပြောဘူးလုို့ မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။
ဒီမေးခွန်းအတွက် ဦးကိုနီရဲ့အဖြေကတော့ ဒီပြဿနာအပေါ် ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပ အမြင်ချင်းအတော်ကွာ နေကြောင်း၊ သူ့အမြင်ကတော့ ရုိုဟင်ဂျာပြဿနာဆုိုတာဟာ အစိုးရကဖန်တီးထားတဲ့ ပြဿနာများစွာထဲက တခုသာဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိကပြသာနာက စစ်တပ်ကြီးစုိုးရေးကိုလျော့ချနုိုင်ဖုို့အတွက် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးသာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါကိုမပြင်နုိုင်ပဲနဲ့တော့ ရုိုဟင်ဂျာပြဿနာအပါဝင် ဘယ်ပြဿနာကိုမှ ဖြေရှင်းဖုို့မလွယ်သေးဘူးလုို့ သူက ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
ပါတီတည်ဆောက်ရေးနဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နုိုင်ခြေရှိ မရှိ
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိစ္စအပြီးမှာတော့ NLD ပါတီအကြောင်းမေးခွန်းတွေကုို မကြည်ပြာက ဖြေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကာလလုံးလုံး စစ်အစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုခံနေရတဲ့အတွက် ပါတီတည်ဆောက်ရေးလုပ်ဖို့ မလွယ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း၊ အခု ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးမှ ပါတီတည်ဆောက်ရေးကို တကယ် လုပ်နုိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ အခုဆုိုရင် မြို့နယ်ပေါင်း ၃၃၀ ရှိတဲ့အနက် ၃၀၂ ခုမှာ ပါတီရုံးခန်းတွေဖွင့်နုိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
(NLD ပါတီအကြောင်း မေးခွန်းတွေကိုဖြေကြားနေတဲ့ ဦးကုိုနီနဲ့ မကြည်ပြာ)
အခု လောလောဆယ်တော့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ၂၀၁၅ မဲစာရင်းမှာ အမှား အယွင်းတွေများလွန်းနေတဲ့အတွက် အဲဒီကိစ္စကုို သူတို့ပါတီက အဓိကဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ နေ့စဉ်ထုတ် ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေနဲ့ ပြည်ပရေဒီယုိုသတင်းတွေမှာလည်း မဲစာရင်းလွဲနေတဲ့အကြောင်း၊ သေပြီးတဲ့လူတွေ မဲစာရင်းမှာပါနေပြီး လက်ရှိနေထုိုင်သူတွေကျန်နေတာမျိုး၊ မိသားစုအလုိုက် စာရင်း ပျောက်နေတာမျိုး စသဖြင့် ကြားနေရပါတယ်။
ဒါဖြင့် အရင် ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွေတုန်းကကော ဒီလုိုပဲ မှားမှား ယွင်းယွင်းနဲ့ လုပ်သွားခဲ့ကြသလားဆုိုပြီး မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။ အရင်ဟာတွေကိုထားလုိုက်တော့။ ၂၀၁၅ မှာ မဲစာရင်းမှားတာကတော့ မဖြစ်သင့်တော့ပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆုိုရင် နော်ဝေးအပါဝင် နုိုင်ငံတကာအကူအညီတွေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပုိုင်းကမှ သန်းခေါင် စာရင်းတွေ ကောက်ထားကြတယ် မဟုတ်ပါလား။ လူဦးရေ သန်း ၆၀ ကျော်တယ်လုို့ခန့်မှန်းထား တဲ့မြန်မာနုိုင်ငံမှာ ၅၁ သန်းပဲရှိတယ်လို့ ဦးခင်ရီတုို့ရဲ့ လ၀က က အတိအကျစာရင်းထုတ်ပြန်ထားတယ် မဟုတ်ပါလား။ ကွန်ပြူတာထဲက အဲဒီ အချက်အလက်တွေသာ မှန်မယ်ဆုိုရင် မဲစာရင်းက ဘာလုို့ မှားစရာရှိမှာလဲ။
ကဲ။ တာဝန်ရှိသူတွေဖက်က မဲစာရင်းကုို အမှန်တုိုင်းအချိန်မီပြင်ပေးလုိုက်တယ်ပဲ ထားလုိုက်ပါတော့။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD နုိုင်ခြေရှိရဲ့လား။ ‘’သူတို့ဖက်က ဘယ်လုိုနည်းနဲ့ပဲညစ်ညစ်၊ ကျမတုို့ NLD က နုိုင်မှာသေချာတယ်’’ လုို့ မကြည်ပြာက အပြတ်ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဦးကိုနီကတော့ လွတ်တော်အမတ် ၁၀၀ ရာခုိုင်နှုန်းမှာ ၂၅ ရာခုိုင်နှုန်းကို စစ်တပ်ကယူထားပြီး သား၊ ၂၀ ရာခုိုင်းနှုန်းခန့်ကိုလည်း တုိုင်းရင်းသားပါတီတွေက ရနုိုင်ခြေရှိပြီးသားဆုိုတော့ ကျန်တဲ့ ၅၅ ရာခုိုင်နှုန်းကိုသာ NLD နဲ့ ကြံ့ခုိုင်ရေးပါတီတုို့ အကြိတ်အနယ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အဲဒီထဲက ၄၅ ရာခုိုင် နှုန်းကုိုနုိုင်ရင်တောင် အများစုနုိုင်တယ်လုို့ ပြောဖုို့ခက်သွားကြောင်း တွက်ပြပါတယ်။
ဒီလုို ဒီရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင်ကတည်းက ၂၅ ရာခုိုင်နှုန်းကို စစ်တပ်ကယူထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် Free and Fair ဆုိုတဲ့နေရာမှာ Fair တရားမျှတမှုမရှိနုိုင်ဘူးဆိုတာက သေချာပေါ်လွင်နေပြီလုို့ သူက ဆုိုပါတယ်။ Free လွတ်လပ်မှုရှိပါ့မလားဆုိုတာကတော့ ဗုိုလ်ချုပ်ဟောင်း၊ ကြံ့ခုိုင်ရေးပါတီခေါင်းဆောင် ဟောင်း ဦးတင်အေးတုို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပေါမှာပဲ မူတည်နေတယ်လို့ ဦးကိုနီက ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကုို ပထမဆုံး နုိုင်ငံတကာဆုအဖြစ် ၁၉၉၀ ခုနှစ်က Rafto လူ့အခွင့်အရေးဆုပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ဘာဂင်အခြေစိုက် Rafto Foundation မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ပုံပါတဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းတွေ လက်ဆောင်ပေးပါတယ်။
နုိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု နှစ် ၁၀၀ ပြည့်အဖြစ် ၂၀၀၁ ခုနှစ်က ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ အဲဒီတံဆိပ်ခေါင်းတွေထဲမှာ ၁၉၉၁ နုိုဗယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ ၁၉၉၃ နုိုဗယ်ဆုရှင် နယ်ဆင်မန်ဒဲလား Nelson Mandela ရဲ့ပုံကုို တွဲပြီးတွေ့ရပါတယ်။
‘‘ရွေးကောက်ပွဲနီးလာရင် ဒီတံဆိပ်ခေါင်းတွေနဲ့ မြန်မာနုိုင်ငံဆီစာပုို့ကြည့်ကြပါလား’' လုို့ သူက ပြောပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများလွန်းတဲ့အတွက် တံဆိပ်ခေါင်း ၁၀၀ လောက် ခဏအတွင်း ပြောင်သွားပါတယ်။ ဒီလူတွေ အမှတ်တရအဖြစ် သိမ်းထားကြမှာလား၊ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာရင် မြန်မာနုိုင်ငံဆီ ဒီတံဆိပ်ခေါင်းနဲ့ တကယ် စာပုို့ကြမှာလား။
ဒီတံဆိပ်ခေါင်းတွေ စထုတ်တဲ့ ၂၀၀၁ နှောင်းပုိုင်း (ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ နုိုဗယ်ဆုပေးလေ့ရှိပါတယ်)နဲ့ ၂၀၀၂ အစောပုိုင်းတွေမှာ အဲဒီကာလက အော်စလိုမှာအခြေစိုက်တဲ့ ဒီမုိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ DVB ရေဒီယုိုကနေ လေလှိုင်းက ကြော်ညာပြီး မြန်မာနုိုင်ငံက ပရိတ်သတ်တွေဆီ ဒီတံဆိပ်ခေါင်းနဲ့ စာပုို့ခဲ့ဖူးတာ ကို သွားအမှတ်ရမိပါတယ်။
ဒီထက်ပုိုပြီးတွေးမိတာက တံဆိပ်ခေါင်းထဲမှာပါတဲ့ တောင်အာဖရိက လူမဲခေါင်းဆောင် နယ်ဆင်မန်ဒဲလား လုိုမျိုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စွမ်းဆောင်နုိုင်ပါ့မလားဆုိုတာပါပဲ။ ဆုိုလုိုတာက မန်ဒဲလားဟာ လူ့အခွင့် အရေးနဲ့ဒီမုိုကရေစီအတွက် စံပြခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ခဲ့သလုို တချိန်တည်းမှာပဲ ANC ပါတီဥက္ကဌ၊ နုိုင်ငံတော်သမ္မတ တာဝန်တွေကိုပါ ဟန်ချက်ညီပူးတွဲ ထမ်းရွက်သွားနုိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မန်ဒဲလာားထက် ၂ နှစ်လောက်စောပြီး နုိုဗယ်ဆုရခဲ့ပေမယ့် အခုထိ သမ္မတ မဖြစ်သေးပါ။ နုိုင်ငံရေးသမားနဲ့ နုိုဗယ်ဆုရှင်ကြား အားပြိုင်နေရဆဲ။ ဒီနေ့ပွဲမှာ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသလုို ‘’ဒီမိုကရေစီအတွက် သင်္ကေတတခု ဖြစ်နေဆဲလား၊ ဒါမှမဟုတ် နိုဘယ်ဆုရှင်ဟာ သူ့ရဲ့ အယူအဆ တွေကို စွန့်လွတ်လုိုက်ပြီလား’’ ဆုိုပြီး မေးခွန်းထုတ်ခံနေရဆဲပါ။
တခါ မန်ဒဲလားက လူဖြူအစိုးရနဲ့ အတိအကျအပေးအယူလုပ်နုိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဲဒီလုို မလုပ်နုိုင်သေးပါ။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ သူနဲ့ကြားမှာ ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆုိုပေမဲ့ လုပ်ပုိုင်ခွင်တွေ အားလုံးနီးပါးက စစ်ဗုိုလ်ဟာင်းတွေနဲ့ လက်ရှိစစ်ဗိုလ်တွေလက်ထဲမှာ ရှိနေဆဲဆုိုတာ လူတုိုင်းက သိနေ ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မွေးနေ့ပွဲမှာ ဦးကိုနီ အရိပ်အမွက်ပြောသွားတဲ့ စကားအရရော၊ မီဒီယာတွေမှာတက်နေတဲ့ NLD ဖက်က လေသံတွေအရပါဆုိုရင်တော့ ၁၉၉၄ တုန်းက မန်ဒဲလားတုို့ ANC ပါတီရွေးကောက်ပွဲအနုိုင်ရစဉ်မှာ (GNU) အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့သလုိုမျိုး ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တုို့ NLD ပါတီကလည်း ကြံ့ခုိုင်ရေးနဲ့ တုိုင်းရင်းသားတွေပါ ပါဝင်တဲ့ ညွန်ပေါင်းအစိုးရတရပ်ဖွဲ့ဖုို့ ကြိုးစားလာ ဘွယ်ရှိတယ်လုို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီညွန်ပေါင်းအစိုးရဟာ မန်ဒဲလားနဲ့ ANC လုပ်ခဲ့သလုိုမျိုး ကြားဖြတ်ကာလ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေတရပ် ရေးဆွဲနုိုင်ပါ့မလား။ အမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတမှုအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနုိုင်ပါ့မလား။ လယ်ယာမြေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ပေးနုိုင်ပါ့မလား၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုတုိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက် ပေးနုိုင်ပါ့မလားဆုိုတာတွေကတော့ မေးခွန်းအဖြစ်ရှိနေဆဲပါ။
ဒီထက်ပုိုအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းကတော့ စစ်ဗုိုလ်ဟောင်း ဦးရွှေမန်းရဲ့ ကြံ့ခုိုင်ရေးပါတီဖက်ကကော F.W de Klerk ရဲ့ အမျိုးသားပါတီလုိုမျိုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ NLD ပါတီနဲ့ အပြည့်အ၀ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ့ မလားဆုိုတာပါပဲ။
ဒီလုိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက် လူအခွင့်အရေးသမားနဲ့ နုိုင်ငံရေးသမားကြားက စံချိန်စံညွန်းတွေကို ဟန်ချက်ညီထိမ်းပြီး နယ်ဆင်မန်ဒဲလားလုိုမျိုး တုိုင်းပြည်ကုိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဦးဆောင်သွားနုိုင်ပါ့မလားဆုိုတာကတော့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလ၊ အသက် ၇၀ ပြည့်မွေးနေ့ပွဲ အလွန်ကာလတွေအတွက် အဓိက မေးခွန်းတခုဖြစ်လာနုိုင်ပါတယ်။ ။